Tuesday,4Dec, 2018 8:47 AM
‘फिल्म बनाउनुभन्दा चलाउनु गाह्रो’, अभिनेत्री हुँदै निर्मात्री बनेकी पूर्णिमा लामाको अनुभव हो यो । हुन त पूर्णिमालाई मात्र होइन, अधिकांश निर्मातालाई आफ्नो फिल्म रिजिल गर्ने बेला सकस हुन्छ, किनकि त्यतिखेर ‘राजनीतिदेखि डनगिरी’सम्मको चलखेल हुन्छ । एक दर्जनभन्दा बढी फिल्ममा अभिनय गरेपछि पूर्णिमाले ‘हिरोज’ निर्माण गरिन् । तर, पैसा झ्वाम्मै डुब्यो । यो उनी स्वीकार्छिन् । करिब एक करोड रुपैयाँ लगानीमा ‘हिरोज’ निर्माण गरेकी पूर्णिमा भन्छिन्, ‘पैसा भएपछि फिल्म बनाउन केही छैन तर, रिलिज गर्नु गाह्रो रहेछ ।’ वास्तविक घटनामा आधारित फिल्ममा अभिनय तथा निर्माण गर्न रुचाउँने पूर्णिमा यतिखेर अर्को प्रोजेक्टको तयारीमा छिन् । यिनै अभिनेत्री तथा निर्मात्री पूर्णिमा लामासँग एमपी सुब्बाको जम्काभेट :
नयाँ प्रोजेक्टको तयारी गर्दैछु । रियल स्टोरी भएकाले अध्ययन र वर्कशप पनि हुँदैछ ।
फिल्मको नाम के जुराउनुभएको छ ?
अहिले स्क्रिप्टमात्र हुँदैछ । चलचित्र विकास वोर्डमा दर्ता गरेको छैन । तैपनि नाम ‘कमेरो’ राख्ने कि भन्ने सल्लाह हुँदैछ । ‘कमेरो’ एउटी कमेरो बेच्ने युवतीको कथा हो ।
तपाइँले फिल्म ‘हिरोज’ बनाउनु भएको थियो । त्यो फिल्मले कस्तो व्यापार ग¥यो नि ?
सबैलाई थाहा छ । फिल्मले लगानी उठाएन । डुब्यो पैसा । नेपालमा सोचजस्तो चलेन फिल्म । विदेश र च्यारिटी शो गरेर मैले चाहिँ आफ्नो लगानी उठाएँ । तर, पार्टनरहरुको लगानी फस्यो ।
फिल्ममा कति लगानी गर्नुभएको थियो ?
निर्माण र प्रमोशन गरी एक करोड पुगेको थियो । ‘हिरोज’मा समाजकै वास्तविक घटनालाई मुख्य विषयवस्तु बनाइएको थियो । त्यसैले पैसा फसेर पनि मलाई खाशै दुःख लागेको छैन । किनकि फिल्म व्यापारमात्र नभएर समाजको मार्गदर्शक पनि हो ।
तपाइँले अरुकै फिल्ममा काम पाइरहनुभएको थियो । यसैबेला फिल्ममा लगानी गर्नु आवश्यक थियो र ?
हो, मैले फिल्म पाइरहेकै हो र अहिले पनि पाइरहेकी छु । तर, म सानैदेखि व्यवसायिक धारणाकी केटी हुँ । फिल्म निर्माण गर्नु भनेको व्यापार हो । व्यापारिक सोचले फिल्म निर्माणमा हात हालेकी हुँ ।
सानैमा कसरी व्यापारिक सोच आयो नि ?
म दोलखाको गाउँमा जन्मेकी हुँ । जतिखेर म कक्षा ७ मा पढ्दै थिएँ । त्यतिखेरै जापान जाने अवसर पाएकी थिएँ । त्यो बेला ७५ जिल्लाबाट छनोट भएर रेयुकाईको तर्फबाट जापान जाने अवसर पाएकी हुँ । त्यसपछि ममा नयाँ सोच पलाउन थाल्यो ।
जापानमा कति समय बस्नु भयो ?
तीन महिना बसेँ । त्यहाँ तीन महिना बस्दा नेपालकै प्रतिनिधित्व गरेकी थिएँ । यो २०५८ सालतिरको कुरा हो । त्यतिखेरै मैले नेपाली २२÷२३ लाख रुपैयाँ कमाएर ल्याएकी थिएँ । त्यसपछि नै ममा व्यापारिक सोच आएको हो ।
फिल्म क्षेत्रमा चाहिँ कसरी लाग्नुभयो ?
ब्युटि पेजेन्टमा सहभागीपछि यो क्षेत्रमा लागेकी हुँ । ‘मिस ब्युटि’ र ‘मिस एञ्जल’जस्ता सौन्दर्य प्रतियोगितामा भाग लिएपछि मलाई फिल्मी अभिनयमा अफरहरु आउन थाल्यो । म ‘मिस एञ्जल–२०६८’को विजेता हुँ । ब्युटि पेजेन्टमा भाग लिँदा मरो नृत्य मन पराएपछि फिल्ममा अफर आएको हो ।
तपाइँको डेब्यु फिल्मचाहिँ कुन हो नि ?
फिल्म ‘रेलिमाई’बाट मैले डेब्यु गरेकी हुँ । त्यसपछि लगातार फिल्ममा काम पाउन थालेँ । मेरो पछिल्लो रिजिल फिल्म भनेको ‘छक्का पञ्जा–२’ र ‘बबी’ हो । आफ्नै निर्माणको त छँदैछ ।
फिल्म निर्मात्री बन्नलाई कतिको चुनौती रहेछ त ?
भनेर साध्यै छैन । पाइलैपिच्छे चुनौती हुन्छ । अर्काको फिल्ममा काम गरेजस्तो हुन्न । आफ्नै लगानी भएपछि समय बढी दिनुपर्ने हुन्छ । एउटा फिल्म बनाउँदा टिममा ६०÷७० जना हुन्छ । ती सबैलाई खुसी बनाउनु पर्ने हुन्छ । साह्रै गाह्रो छ ।
नेपाली दर्शकले रियल स्टोरी बोकेको फिल्मलाई नरुचाएको पो हो कि ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन किनकि अहिले फिल्म मनोरञ्जनमात्र नभएर सिप, ज्ञान र सुचनामूलक बन्न थालेको छ । र, बन्नु पनि पर्छ ।